Mogadishu Journal » Arsenal oo 3-0 ku garaacday Chelsea iyo natiijooyinkii maanta ee horyaalka Primeir League
Arsenal oo 3-0 ku garaacday Chelsea iyo natiijooyinkii maanta ee horyaalka Primeir League
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates ku dubatay kooxda ay aadka u xafiiltamaan ee Chelsea, kaddib markii ay ku garaacday 3-0, iyadoo goolashaas ay dhasheen qeybtii hore ee ciyaarta.
Arsenal oo lixdii kulan ee u dambeysay aanay wax gool ah ka dhalin Chelsea ayaa caawa mar kaliya ku fur furatay, guushan ayaa siisay Tababare Arsene Wenger kalsooni iyo rajo, iyadoo u buuxsantay 20 sano oo uu Kooxda leylinayay.
Daqiiqadii 11aad Arsenal ayaa heshay goolkii hoggaanka, waxaana ku fara yareystay Sanchez oo si cajiib leh kaga dulqaaday goolhaye Courtious, kaddib markii uu ka faa’ideystay qalad uu galay Cahill oo kubad aan dhameystirneyn u baasay saaxibkiis, balse Sanchez ayaa meel cidle ah ka dafay, shabaqana ku hubsaday.
Saddex daqiiqo kadib Arsenal ayaa gool labaad ah dhalisay, waxaa uu ahaa mid si aad ah looga soo shaqeeyay, waxaana shabaqa ku hubsaday Theo Walcott.
Arsenal ayaa wixii markaas ka dambeeyay maamulka ciyaarta si dhameystiran ula wareegtay, waxaana daqiiqadii 40aad ay heshay goolkii saddexaad, waxaana u dhaliyay Ozil oo baas fiican ka helay Sanchez.
Qeybta hore ayaa ku idlaatay 3-0 oo ay Arsenal ku hoggaamineysay, waxaana markii qeybta labaad la isku soo laabtay labada kooxood ayaa wax goolal ah iska dhalin waayay, balse fursado dhowr ah iska khasaariyay.
Daafacyada Arsenal, Mustafi iyo Koscielny ayaa laf dhuun-gashay ku noqday weeraryahanada Chelsea sida Costa, Hazard iyo Willian.
Dhinaca kale natiijadooyinka maanta ayaa waxay ahaayeen sidan:-
Kooxda Manchester City ayaa 3-1 uga badisay Swansea City
Manchester United ayaa 4-1 uga badisay Leicester City, waxaa goolkii u horeeyay u dhaliyay Pogba.
Liverpool ayaa 5-1 uga badisay Kooxda Hull City
Tottenham ayaa 2-1 uga badisay Middlesbrough
Duqeyntii magaalada Halab oo halkeedii wali ka sii socta